အကောင်းဆုံး XPE Puzzle Mat ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ Yilibao
Mat ကစားခြင်း EPE
XPE ကစား Mat
XPE ခေါက် Mat (ဖိ Edge)
XPE ခေါက် Mat (အပ်ချုပ် Edge)
EPE ပဟေPuzzleိ Mat
XPE ပဟေPuzzleိ Mat
EVA ပဟေPuzzleိ Mat
TPU ဖျာ Mat
TPU ခေါက် Mat
EPE အဆိပ်မဖြစ်စေသည့်ဂေဟစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်သော Play Mat
XPE အဆိပ်မရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Play Mat
အဆိပ်အတောက်ကင်းသောနှင့်ဂေဟစနစ် - XPE Puzzle Mat ကို XPE အမြှုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကလေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ဂေဟစနစ်နှင့်အဆိပ်မသင့်သောပစ္စည်းဖြစ်သည်။
၁။ အဆိပ်အတောက်ကင်းသောနှင့်ဂေဟစနစ် - XPE Puzzle Mat ကို XPE အမြှုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကလေးများအတွက်လုံခြုံမှု၊
၂။ အကာအကွယ် - XPE Puzzle Mat သည်နူးညံ့။ ချော်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကလေးများကစားနိုင်ပြီးဘေးကင်းစွာပြေးနိုင်သည်။
၃။ ပညာရေး - ဖျာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောအက္ခရာများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ နံပါတ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဖျာပေါ်ရောင်စုံလှပသောဒီဇိုင်းများ။ ဒီဟာတွေကကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ကောင်းတယ်။
4. လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ XPE ပဟေmatိဖျာသည်ရေစိုခံသည်။ သငျသညျစိုစွတ်သောအထည်နှင့်အတူကသန့်ရှင်းရေးကလွယ်ကူသည်။
(၅) ပို၍ ကြာရှည်ခံ။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။ XPE ပဟေmatိအခင်းသည် XPE အမြှုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး EPE ပဟေmatိဖျာထက် ပိုမို၍ ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဖောက်သည်များကို ဦး စားပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးရိုးသားသောပံ့ပိုးသူသာမကတရုတ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုသစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသာမကပါ ၀ င်ရလွယ်ကူသောသန့်ရှင်းသောစက်ရုံစျေးနှုန်းသစ်ဒီဇိုင်းအကြမ်းခံ XPE EPE ကြမ်းခင်းကြမ်းခင်းကြွက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ အမြှုပ်ကြမ်းခင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ကျသောအရောင်းအ ၀ ယ်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများနှင့်လျင်မြန်စွာဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုသင် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသငျသညျကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရန်အလားအလာပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုတိုးတက်အောင်နှင့်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% မူလစက်ရုံအတွက်သုတေသနနှင့်တိုးတက်မှုများကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်ရရှိသည်။ တရုတ်နူးညံ့သောရေစိုခံနိုင်သည့်ကလေးမပါသည့်ကလေးကစားကွင်းကာတွန်းအကြီးစား XPE ပဟေ,ိကစားပွဲ။ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်တစ်သက်တာလူတန်းစားအားလုံးမှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ နှင့်မနက်ဖြန်ပို။ ထူးချွန်နှင့်ကြက်သရေထုတ်လုပ်။
၁၀၀% မူရင်းစက်ရုံ China Foam ကြမ်းခင်းခေါက်ကလေးကစားခြင်းနှင့်ကလေးရေမြှုပ်ကစားခြင်းစျေးနှုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်နိယာမကို အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ရန်အစဉ်မပြတ်ကြိုးပမ်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖိတ်ကြားသည်။ ဖောက်သည်ဟောင်းများနှင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်အတူတကွလက်တွဲရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ဖောက်သည် ဦး တည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အစပျိုးမှုအကျဉ်းချုပ်နှင့်ချို့ယွင်းချက်များတိုးတက်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ ယ်သူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုပိုမိုရရှိစေပြီး၊ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါရန်သတိရပါ။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့လည်ပတ်ခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ သင်တို့နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိပြီးဖော်ရွေသောမိတ်ဖက်ပြုမှုကိုစတင်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ အသေးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: 3D နောက်ခံပုံများ
Abc ပဟေPuzzleိ Mat
XPE ပစ္စည်း Play Mat
လိပ္စာ: အမှတ် ၅၃၄၊ Miaoling ကျေးရွာ၊ Longshen လမ်းနှင့် Gongye စတုတ္ထလမ်းဆုံ၊ Lanshan စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ Linyi City, China, Shandong